Ny fatiantoka indostrian'ny zotram-piaramanidina dia mitentina $ 200 miliara ambony amin'ny taona 2020-2022
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny fatiantoka indostrian'ny zotram-piaramanidina dia mitentina $ 200 miliara ambony amin'ny taona 2020-2022
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Tsy nanary ny faniriany handeha ny olona raha ny fahitantsika ny faharetan'ny tsena anatiny. Saingy sakanana amin'ny fivezivezena iraisam-pirenena izy ireo noho ny fameperana, ny tsy fahatokisana ary ny fahasarotana.
Ny fatiantoka indostrialy dia andrasana hampihena ho $ 11.6 miliara amin'ny 2022 taorian'ny fatiantoka $ 51.8 miliara tamin'ny 2021 (niharatsy tamin'ny fatiantoka 47.7 miliara dolara novinaina tamin'ny volana aprily).
Ny fangatahana (refesina amin'ny RPKs) dia antenaina hijoro amin'ny 40% amin'ny haavon'ny 2019 ho an'ny 2021, hiakatra amin'ny 61% amin'ny 2022.
Ny isan'ny mpandeha an'habakabaka dia antenaina hahatratra 2.3 miliara amin'ny 2021.
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) nanambara ny fomba fijeriny farany ny fahombiazan'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina mampiseho vokatra mihatsara ao anatin'ny krizy COVID-19 mitohy:
Ny fatiantoka indostrialy dia andrasana hampihena ho $ 11.6 miliara amin'ny 2022 taorian'ny fatiantoka $ 51.8 miliara tamin'ny 2021 (niharatsy tamin'ny fatiantoka 47.7 miliara dolara novinaina tamin'ny volana aprily). Tombana ho fatiantoka amin'ny taona 2020 novaina ho $ 137.7 miliara (avy amin'ny $ 126.4 miliara). Manampy ireo, ny fatiantoka indostrialy amin'ny 2020-2022 dia antenaina hahatratra $ 201 miliara.
Ny isan'ny mpandeha dia antenaina hahatratra 2.3 miliara amin'ny 2021. Hitombo hatrany amin'ny 3.4 miliara izany amin'ny 2022 izay mitovy amin'ny ambaratonga 2014 ary ambany noho ny 4.5 miliara ny mpandeha amin'ny taona 2019.
Ny fitakiana matanjaka amin'ny entam-piaramanidina dia antenaina hitohy amin'ny fangatahana 2021 amin'ny 7.9% ambonin'ny taona 2019, mitombo ho 13.2% ambonin ny haavon'ny 2019 ho an'ny 2022.
“Ny haben'ny krizy COVID-19 ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia goavana tokoa. Nandritra ny vanim-potoana 2020-2022 ny fatiantoka tanteraka dia mety ho ambony $ 200 miliara. Mba hivelomana amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia nanapaka ny vidiny ary nampifanaraka ny orinasany amin'izay mety misy. Izany dia hahita ny fihenan'ny $ 137.7 miliara amin'ny 2020 hihena ho $ 52 miliara amin'ity taona ity. Ary hihena hatrany amin'ny $ 12 miliara izany amin'ny 2022. Efa tafavoaka tamin'ny farany ny krizy lalina indrindra isika. Na dia misy aza ny olana matotra dia hita ny làlana mankany amin'ny fanarenana. Ny fiaramanidina dia maneho ny fahaizany miverina indray, ”hoy izy Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATAal.
Mihazakazaka tsara ny orinasam-pitaterana an'habakabaka, ary ny fitsangatsanganana an-trano dia hanakaiky ny haavon'ny krizy amin'ny 2022. Ny fanamby dia ny tsena iraisam-pirenena izay mbola kivy tanteraka rehefa mitohy ny fameperana napetraky ny governemanta.
“Tsy namoy ny faniriany hivezivezy ny olona araka ny ahitantsika ny faharetan'ny tsena anatiny. Saingy sakanana amin'ny fivezivezena iraisam-pirenena izy ireo noho ny fameperana, ny tsy fahatokisana ary ny fahasarotana. Betsaka ny governemanta no mahita ny fanaovana vaksiny ho fialana amin'izao krizy izao. Manaiky tanteraka izahay fa ny olona vita vaksiny dia tsy tokony hofehezina amin'ny fomba rehetra. Raha ny marina, ny fahalalahana mivezivezy dia mandrisika olona betsaka hatao vaksiny. Ny governemanta dia tokony hiara-hiasa ary hanao izay rehetra azony atao mba hahazoana antoka fa misy vaksiny ho an'izay maniry izany, "hoy izy Walsh.